Shina Sosialy Shinoa Mampiaraka Lahatsary Fampiharana Chat Room ho an’ny Android APK-Download-ny
Shina ara-Tsosialy dia premium mampiaraka an-tserasera fampiharana any Sina. Shina Sosialy dia natao mba hitondra Shinoa Iray ny Lehilahy sy ny Vehivavy eo amin’ny fiaraha-monina miaraka, izay tsy afaka ny ho namana sy ny hihaona Shinoa tokan-tena. Tadiavo ny asa mpiara-miasa, namana vaovao, mangatsiatsiaka daty na ny soulmate, noho ny fitenenana mahazatra na ny fifandraisana maharitra. Hanatevin-daharana ny tsy mitsaha-mitombo-piarahamonina an-tserasera, izay afaka hifanakalo lahatsary, hiresaka sy ny sary miaraka amin’ny tsara tarehy iray ny lehilahy sy ny vehivavy ao shina. Shina ara-Tsosialy no mpampiasa namana fampiharana afaka manampy anareo ny tonga lafatra mpiara-miasa akaiky anao. Inona no mahatonga an’i Shina ara-Tsosialy tsy manam-paharoa dia ity: Tsy afaka mivory ny olona mivantana, amin’ny alalan’ny fijerena horonantsary ireo. Fivoriana olona vaovao, ny fanaovana namana, niady hevitra, mifanerasera, ary na dia mampiaraka dia tsy mbola nisy fa mahafinaritra. Tsy toy ny hafa tambajotra manana lahatsary mombamomba. Nilaza izy ireo fa ny sary dia mendrika ny teny arivo sy lahatsary iray, fara fahakeliny, ny arivo sary. Izahay dia namorona lahatsary iray mifototra amin’ny sosialy fampiharana, satria afaka haneho ny tenanao bebe kokoa ny marina tsara amin’ny horonan-tsary, ary aoka ny toetra hamirapiratra amin ny alalan.
Manana ny sary koa, fa ny horonan-tsary dia be mahafinaritra kokoa. Aza t mahatsapa ho toy ny mijery sary na lahatsary ny olona sy ny tokan-tena. Avy eo dia hangout ao amin’ny chat room sy hafatra ny olona manodidina, na na aiza na aiza-kafa hatrany. Hiresaka amin’ny olona ao an-toerana na hanatevin-daharana ny tontolo izao chat room, ary hiresaka amin’ny olona manerana izao tontolo izao. Ny fitiavana ny hihaona olona vaovao, ho namana na ny hahita ny daty mandehandeha amin’ny alina.
Ny s mora
Azonao atao ny manomboka amin’ny fijerena horonantsary ny tokan-tena sy rehefa tianao ny olona iray, tsindrio fotsiny ny fo. Raha toa ianao indray, dia hampifandray anareo roa.
Te-hanampy ny handrava ny ranomandry
Mandefa azy ireo ny ‘Hi’. Afaka mandefa hafatra tsy manam-petra, lahatsary sy ny sary samy hafa. Ny fitadiavana ny daty, namana vaovao, niady hevitra, mampiaraka dia tsy mbola nisy toy izany mora. Ary ny tsara indrindra amin’ny rehetra, ny s maimaim-POANA. Amin’ny fampidirana ny tenifototra teny izay milaza ho an’ny Lalao Fampiharana, ianao manampy mba hanaovana ireo Lalao sy ny Fampiharana ho bebe kokoa discoverable amin’ny alalan’ny Lahatsary hafa Mampiaraka mpampiasa
Lehibe ny Fifandraisana: ny Olona ny fomba Fijery ny →